फटाहा सरकार र निरिह नागरिक, कमिशनको गोलचक्करमा नेता - नेपालबहस
फटाहा सरकार र निरिह नागरिक, कमिशनको गोलचक्करमा नेता
| १७:२४:१३ मा प्रकाशित
वर्तमानको दुई तिहाईको सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मन्त्र जाप लगाउन थालेको पनि धेरै भैसक्यो । कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा धेरै पानी बहेर गैसक्यो । महिनौ सुतेर दिउसै सपना देख्ने बानी परिसकेका हाम्रा नेताहरुलाई बन्द आँखा, बन्द कोठा र कार्यकर्ताको बन्द घेराभित्र रहेर मूलुक समृद्ध बनाउन सकिदैन भन्ने कुराको आभाष कहिले हुने हो ? समृद्ध नेपाल बनाउन र जनतालाई सुखी भएको अनुभव गर्न अहिलेकै रफ्तारमा हिडेको बयलगाडाले कहिले गन्तब्यमा पुर्याउने हो ?
बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनौ भने पनि अहिले त मध्यान्ह कटाई सकिएको अवस्था भैसकेन र ? खै त मुलुकमा कुनै गतिलो परिवर्तनको झल्को देखाएको छैन त ? जनता माहामारीसँग आफ्नै बलबुताले मुकाबिला गरिरहेका छन् सरकार भने बालुवाटारमा उत्तानो टाँङ्ग लगाएर मस्त निद्रामा सुतेको छ । भ्रष्टहरुका आलिङ्गनमा रमाएका देशका सारथिहरुलाई देश कतातिर गैरहेको छ भन्ने हेक्का समेत हुन छाडेको छ । कमिशनको गोलचक्करले नेताहरुलाई गोमन सर्पले झै गाँजिसेको छ । अहिले नेता गाँउ जान छाडिसके जनतालाई देखाउने भ्रष्ट अनुहार आफैले ऐनमा हेर्न छाडिसके ।
यस्तो अवस्थामा पनि अझै सरकार देशमा आर्थिक वृद्धि गर्ने र विकासको छलाङ्ग मार्ने सपना जनतालाई बाँडिरहेको छ । थेग्नै नसक्ने संघियतालाई टेको लगाउन विदेशी सरकारसँग हात फैलाउन र देशकै अस्तित्व धरौटी राखेर डलर भित्र्याउने ध्याउन्नमा लागिरहेको छ । यसरी नै झर्ला र खाउँला भनेर बाटो हेर्दा हेर्दै नेपाली जनताका आँखा थाकी सके । यिनका फोश्रो आश्वासनरुपी भाषण सुनेर नेपाली जनताका कान पाकिसके । यस्तो अवस्थामा अझै पनि देशमा समृद्धि र विकास ल्याउँछौ भन्नेहरुको डिङ्ग देख्दा अचम्म लाग्छ अनि सोध्न मन लाग्छ समृद्धि कहाँबाट आउँछ सरकार ? नेपाली जनताले सुख अनि शान्तिको सास फेर्न कहिले पाउँछ सरकार ?
कोशी, नारायणी, कर्णाली,सेति र महाकालीको मात्रै हैन हजारौ नदीनाला, खोलानाला अनि देशमा रहेका झरनाहरुमा रहेको नेपालीको अमुल्य सम्पत्तिका रुपमा रहेको पानीलाई उपयोग गर्दै सेतो बत्ति बनाउन सक्ने प्रचुर सम्भावनाहरुका अतिरिक्त तराईका फाँटहरुमा सिंचाईको लागि पानीको उपयोग गरी नहर, कुलो आदिको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने पनि देशले कृषिमा बिदेशीको भर पर्नु पर्ने थिएन । तर यि भ्रष्टका मतियारहरुले नत नागरिकलाई नहर दिए, नत कुलो । पैसा तिर्दा पनि एक बोरा मल किन्न नसकेर यसपटक कति किसानको मन रोयो ? कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरेर स्वदेशमा खपत गर्दै बिदेश निर्यात गर्न सके बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्थ्यो । तर अहिलेको भयाभव कृषि हेर्दा लाग्छ सरकारको कृषिमा लगानी बालुवामा पानी झै भएको छ । यसले कृषि क्षेत्रको बिकासमा कुनै दरिलो भरोषा र आत्मबिश्वास आम किसानमा जगाउन सकिएको छैन ।
हिजो सिल्बरको थालमा जनताका घर आँगनमा गएर खाना खानेहरु आज कसरी रातारात सुनको थालमा खान सक्ने भए ? हिजो चाँदीको थालमा खाने हैसियत भएका नेपालीहरु यिनै भ्रष्ट नेताका कारण आज टपरिमा खाने बनाए । तर पनि नेपाली जनताको भित्री आँखा अझै पनि उघ्रिएको छैन । यिनलाई पुल्ठो लगाएर धपाउन सक्ने कुनै बहादुर छोरो जन्मिएको छैन । यिनलाई महाराज बनाउन हामीले राजनैतिक आन्दोलन गरेको पनि हैन । जनताका समस्यामा किञ्चित पनि ध्यान दिन यिनिहरुलाई कुनै समय उभ्रिएको पनि छैन । अगाडि पछाडि भतुवाहरुको लावा लस्कर छ । तल माथि सबै सेटिङ्गमा काम गर्ने सुन र रक्त चन्दनको तस्कर छ । जनताका आँखामा छारो हाल्न कहिले त्रिपालले छोपेको रेल देखाउँछन् कहिले पानीजहाज कार्यालय खोलेर निमुखा र गरिव जनताको मन दुखाउँछन् । यस्ता अपराधि सोच भएका नेताहरुबाट अझै कति दिन नेपालीले आफ्नो दिन सुध्रिएलान भनेर आश गर्नु ? रोगको माहामारीले आक्रान्त पारिसकेको अवस्थामा विना औषधिको पीसीआर टेष्ट गराएर कहिले यिनिहरु कै फाईदाका लागि कोरोना पोजेटिभ भएर मर्नु ?
कम्यूनिष्टहरुले कुनै ब्यक्तिगत सम्पत्ति राख्दैनन्, ब्यक्तिगत अकुत सम्पत्ति राख्नेहरु कहिल्यै कम्यूनिष्ट हुन सक्दैनन् भनेर अहिले पनि अरिङ्गालहरु गित गाउँदैछन् । नेपालका कम्यूनिष्टहरु भने अहिले पनि घर भित्रै खानेपानीको ट्यांकीमा अकुत सम्पत्ति लुकाउँदैछन् । यिनिहरुलाई जनताको समस्यामा कुनै चासो छैन, बुटवलको जग्गा दलालीलाई भालसवाङ्गमा सेटिङ्ग मिलाउनु छ । जनता भाँडमा जाउन यिनिहरुलाई अब राप्ति नदीको बगर बेचेर अर्बौ अर्ब रुपैयाँ कमाउनु छ । तर खबरदार है कमरेडहरु तिमिहरुको यस्तै चर्तिकाला केहिदिन रहिरहने हो भने जनताको धैर्यताको बाँध फुटन सक्छ । नेपाली जनतामा २०६२/०६३ को झै अर्को नागरिक एकता जुटन् सक्छ । त्यतिखेर कमरेडहरुका अहिलेका आलिसान महलहरु अनि जनता चुसेर कुम्ल्याईएका पैसाका पोकाहरु जनताले बिच सडकबाटै लुछ्न सक्छन् । भएको सिरिखुरी सिनिक्कै पारेर २०४६ साल पूर्वकै अवस्थामा झार्न सक्छन् । मलाई त डर लागिरहेछ कतै जनताको आक्रोसको ज्वाला फेरी तिनै माननिय, हाननीय, ताननीयहरु तर्फ नफर्कियोस् । जनताको आक्रोसको ज्वालाले कतै बालकोटे र जाजरकोटेलाई एउटै दर्जामा झारिदिए भने, पजेरोका पाङा फुकालेर हिजोको झै साईकलमा हिडने बनाई दिए भने, मार्सी चामलको डकारले उम्लिएकाहरुलाई कान्छि चामलको खोले खाने अवस्थामा झारिदिए भने अहिलेको सान, मान र अभिमान सबै चकनाचुर हुनसक्छ । यतिबेला तपाईको मात्र हैन तपाईका आसेपासे, आफन्त, सालासाली कत्तिको मन रुन्छ ? हेक्का राख्नु भएकै होला ।
खान लाउन नपुगेर राजनितिमा लागेकाहरु र राजनितिज्ञहरुलाई खाना, नाना र छानाको ब्यवस्था मिलाएर कङ्गाल भएकाहरुको बिचको बर्तमानको यथार्थ चित्रण हेर्दा लाग्छ हिजोका हात्तिछाप चप्पलेहरुको अहिलेको काठमाण्डौका नयाँ माहाराजाहरु बनेको देख्दा कतै माहाकालीको पानीको, कतै माहारानीको, कतै चुच्चे नक्सा त कतै राम जन्मभूमिको कमाल त हैन ? बिदेशी प्रभूलाई चित्त बुझाए बापद प्राप्त भएको आर्शिबाद सहितको उपहार त हैन ?
प्राचिन युनानको एउटा प्रशिद्ध ज्योतिषि राती हिडदा हिडदै बाटोमा रहेको एउटा ईनारमा खसेछ । कुनै बुढी आमाले ईनारमा खसेको उक्त राज ज्योतिषिलाई बाहिर निकालि दिईछन् । ईनारबाट बाहिर निस्किसके पछि उक्त ज्योतिषिले बुढी आमालाई भनेछन् बुढीआमा तपाईले मलाई आज अप्ठ्यारोमा परेको बेला सहयोग गर्नु भो, म राज ज्योतिषि हुँ, भोलि म कहाँ आउनु होला तपाईँको भविष्य खुलस्त बताई दिनेछु । राज ज्योतिषिको कुरा सुनेर बुढीआमाले भन्नुभएछ भैगो बाबु, आफु अगाडिको खाल्डो नदेख्नेले मेरो के भविष्य बताउनु होला ? बरु मेरो एउटा बिन्ति छ, सुनेर जानुहोला बरु आफुचाहिँ आखा राम्ररी हिडनुहोला, सबै ठाउँमा म नहुनसक्छु । अहिलेका बिकासे नेताहरुको भाषण पनि यहि भविष्यबाणीसँग त मेल खाई रहेको छैन ? आफु केहि गर्न नसक्नेका समृद्धिका सपनाहरुको ब्यापार ।
जनताको सरकारको नामाकरण गरिएको बर्तमान भ्रष्टहरुको जमातले गरिव, असहाय र आर्थिक अवस्था समेत कमजोर भएर नागरिकको राहतको पर्खाईमा दिन गुजारिरहेका नागरिकका छोराछोरीहरुलाई अहिले अनलाईन कक्षामा पढन आउ भनेर आफैले आफैलाई गिज्याईरहेको छ । कस्ता बालबालिकाहरुले अनलाईन कक्षा पढन् सक्छन् ? अनलाईन कक्षा पढनका लागि के कस्तो भौतिक तथा प्राबिधिक ज्ञान र सामाग्रीहरुको आवश्यकता पर्छ ? कस्ता मोबाईलमा जुम चलाउन सकिन्छ ? आम नागरिकको घरमा बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ परिरहेको अवस्थामा कसरी डाटा प्याक खरिद या नेट जडान गर्लान ? एउटा घरमा स्कूल, कलेज पढने बालबालिकाहरुको संख्या कति छ ? त्यसका लागि कति थान मोवाईल या ल्यापटपको आवश्यकता पर्छ ? छरिएर रहेका गाउँहरुमा बिद्युत सेवा कति ठाउँमा पुगेको छ ? नपुगेको ठाउँमा कसरी जुम कक्षा चलाउने ?
विद्यालय र कलेज पढने विद्यार्थिहरुको कसरी समय तालिका मिलाउने ? यि र यस्ता अनगिन्ति समस्याहरु एकातिर पन्छाएर सबै बालबालिकाहरु बालुवाटार र सिंगदरबारको निकटमा बस्छन् भन्ने अनुमान लगाउनु के मुर्खता हैन र ? यत्ति पनि बिचार गर्ने मनुवा त्यत्रो बडेमानको सरकारमा छैन र ? अहिले जताततै बालिका बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् । अब छोरीहरुलाई विद्यालय पढन पठाउने कि नपठाउने भनेर अभिभावकहरुनै अलमलमा परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकले बिद्यालयले आफुखुसी तोकेको भर्ना शुल्क तिरिदिनु पर्ने ? जहिले मन लाग्यो त्यहिले अन लाईन कक्षा पढी दिनु पर्ने ? स्वयं सरकार नै कानूनी राज्यको उपहाँस गरिरहेको छ । कोरोनाको डर देखाएर नागरिकका नाममा आफै अरबौं अरब रुपयाँ हसुरीरहेको छ । ओम्नी र यतिराजहरुको डिजाईनमा चलेको सरकार, नागरिकको समस्यालाई रौंसम्म नगन्ने सरकार, निरीह नागरिकका भोको पेटमा लात हानेर आफु मार्सी चामलको भात खाएर डकार्दै हिडने सरकार, यस्तो फटाहा सरकारलाई नागरिकलाई परेका अनगिन्ति समस्याका बारेमा के को दरकार ?
अब त जनताहरु पनि आजित भैसकेका छन् अनि भन्न थालेका छन् यो जिरे खुर्सानीलाई जति मलजल गरेपनि भेडे र अकबरेको साईजको बनाउन नसकिने भो । चिराईतोलाई घ्यू र मह हाले पनि अंगुर नबन्ने भो । जनताले जति नै खबरदारी गर्दा पनि यो सरकार नसुध्रिने भो । भो अब थप प्रयास नगरौं । बरु सबै नागरिकहरु मिलौं अनि बैकल्पिक सरकारको खोजि तर्फ अघि बढौं ।
बाँके र प्युठानमा थप एक-एक जना संक्रमितको मृत्यु ८ मिनेट पहिले
काेराेनाले विराटनगरमा थप ६ जना संक्रमितको मृत्यु १२ मिनेट पहिले
दुर्घटनामा घाइतेको उपचारको क्रममा मृत्यु २५ मिनेट पहिले
दुर्घटनामा घाइते महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु २९ मिनेट पहिले
झापामा कोरोना संक्रमित एक वृद्धको मृत्यु ३५ मिनेट पहिले
बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोभिड अस्पतालको स्तरोन्नति ५२ मिनेट पहिले
नायक पुष्प र उषाको रोमान्समा मेरो माया लाग्छ र ? ७ दिन पहिले
स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन केन्द्र ३ हप्ता पहिले
मौसम सफा भएपछि देखियाे हिमाल १ दिन पहिले
अन्तर्राष्ट्रिय भिडियो कन्फरेन्समा भाग लिँदै अर्थमन्त्रीले राखे सहयोगको अपेक्षा ७ महिना पहिले
मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पारित, एसिड छ्याप्नेलाई २० बर्ष कैद, १० लाख जरिवाना ! १ महिना पहिले
नव गायिका अश्मिता परियारको नयाँ गित “कुन सुरुवात” १ महिना पहिले